XILKASKII LA XASUUQAY | KEYDMEDIA ENGLISH
XILKASKII LA XASUUQAY
Soomaaliya waxay maanta dib u xasuusanaysaa maalin madow oo ay ku waysay dad qaali ah, oo dalka indho u ahaa iyo ubax soo baxayay oo si arxad darro ah loogu xasuuqey mid kamid ah qaraxyadii ismiidaaminta ee ugu horeeyay ee ka dhaca Muqdisho.
Maanta oo kale Labo iyo tobon Sano ka hor 3-dii bishii December sanadkii 2009 waxaa ka dhacay hotel shaamo qarax ilaa hadda dadka quluubtooda ka tirmin, kaasoo noqday dhacdooyinka dalka soo maray midii ugu xanuunka badneyn.
Waxaa mar qura Munaasbad Farxad qalin-jebin ahayd lagu afjaray dhimasho iyo dhaawac.
Waxay ahayd maalintaas madow maalin khamiis ah, xili subax ah, oo ka socotay Xaflad qalin jabin ah hoolka shirarka hotel Shaamow, oo loo dhigayay arday ka ka aflaxdey Jaamacadda Banaadir.
Waxaa goo goobjoog ahaa Arday, Waaliidiin, dhaqaatiir, macalimiin, Wasiiro qaranka u shaqeynayay, wariyayaal iyo marti Sharaf kale. Dareenkuna mid farxadeed buu ahaa billowgii balse geba-gebadiisa ma ahayd mid qurxoon, oo sidii la filayay ku dhamaadey.
Keydmedia Online oo loo Aas-aasay sare u qaadida Codka kuwa aan codka lahayn, iyo dhibanayaasha argagaxisada, ayaa warbixinta ugu tala-gashay dib u xusuusinta akhristiyaasheeda dadkii qiimaha badnaa ee lagu dilay, laguna dhaawacay qaraxii hotel Shaamow oo manta 12 sano kasoo wareegatay.
Waxaa goobta ka dhacay waxay ahayd arin lama filaan ah.
Qaraxa is-miidaamin ah waxaa fuliyay nin soo xirtay dharka dumarka, kaasoo kasoo dhex baxay dadka goobta fadhiyay, isagoo usoo tallaabey qeybta minbarka ee ay ka socdeen khudbadaha madaxda dowladda, mas’uuliyiinta Jaamacadda iyo marti-sharafta kale.
Xiliga qaraxa waxaa socotay khudbad uu jeedinayay Dr Dufle, oo kamid ah aas-aasiyaasha Jaamacadda Banaadir, iyadoo hareerihiisa ay fadhiyeen madax kala duwan oo intooda badan goobta ku dhintay.
Dhacdadaas murugada lahayd waxay galaaftay nolasha 25 ruux, iyadoo ay ku dhaawacmeen 60 kale oo isugu jiray dhaqaatiir, Aqoonyahano, Wariyayaal, Arday iyo wasiiro ka tirsanaa dowladdii KMG ahay ee Sheekh Shariif oo goobta u tagay in dhaqaatiirta da’da yar ee qalin jabisay ay la wadaagaan farxadda.
Saddex wasiir oo kala ahaa Axmed C/llaahi Waayeel, wasiirkii waxbarashadda, Qamar Aadan Cali, Wasiirkii Caafimaadka iyo Ibraahim Xasan Caddow, wasiirkii Tacliinta sare iyo saddex wariye ayaa kamid ahaa dadkii weerarka ku dhintay.
Ninka is qarxiyay waxuu ahaa 23 jir, Soomaali ka yimid Denmark kaasooo maalmo kahor sii kireystay qol kamid ah hotel-ka, halkaasoo uu ogaa inay xafladda ka dhacayso oo madax dowladda katirsan ay kasoo qeybgalayaan. Cidna ma sheegin wali weerarkii hotel Shaamo, balse Sheekh Shariif oo xiligaas dalka Madaxweyne ka ahaa ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab.
Waxaa lala yaabey in aanay laamaha Ammaanka ee dowlada ay heli waayeen xogta qarax lagu diyaariyay gudaha hotel ay madax kala duwan iyo Xildhibaano degan yihiin, sidoo kale ay ka dhacaysay xafladda wasiiro ka qeybgalayeen.
Marka la eego qaabkii uu qaraxaasi u abaabulnaa, waxaa soo baxay tuhuno ah in shaqsiyaad caan ah ay qaraxaasi wax ka ogaayeen, waxaana loo maleynayaa in dadkii falkaasi fuliyay ay ahaayeen kuwa diidan horumarka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta gaar ahaan Muqdisho oo mudo xasuuq ku socdo.
Dadka ku nool Muqdisho waxaa lagu tilmaamaa bulsho adkaysi badan, oo u dhabar adeygaya xaaladaha kala duwan ee ka jira magaaladda, oo aysan marna u joogsan nolol maalmeedkooda.